Gbasara Anyị - HEBEI ENGE BIOTECH CO., LTD
ENGE Amụrụ maka Ọrụ Ugbo
Gbado anya na ahụike
Enge Biotech chọtara na Shijiazhuang Hebei, China. na-arụ ọrụ n'ichepụta agrochemicals gụnyere Insecticides, Herbicides, Fungicides, Ndị na-ahụ maka ihe ọkụkụ ， Ọha na ahụ ike ọha na eze, Pesticide intermediates na Fatịlaịza. , SL, ME, GR, wdg. Ndị otu anyị nwere ihe karịrị afọ 20 nke mmepụta ọgwụ ahụhụ. Kwado karịa ndebanye aha 50 (ICAMA) yana ike dị ike na ngwaahịa R & D.
Ogo Bụ Ndụ nke Companylọ Ọrụ Anyị. Enge Biotech ngwaahịa niile si kwenye, gbaara suppliers, Anyị ụlọ ọrụ na-achịkwa ngwaahịa mma nditịm, na elu mmepụta akụrụngwa na ụwa, anyị ịzụlite na Nlụpụta na a ọrụ ụzọ, huu na anyị na ngwaahịa na mmepụta Filiks soro na kachasi ike ụkpụrụ.
Nzute ụkpụrụ FAO, ma gbalịakwa nke kacha mma iji nweta ụdị mma pụrụ iche ndị ahịa chọrọ.
Inye ndị ahịa ngwaahịa dị mma, nke na-enwe mmekọrịta obibi na gburugburu ebe obibi na nke dị mfe iji.
Inye ndị ahịa ogologo oge, kwụsie ike ma na-adigide ngwaahịa na ọrụ.
Akwado site na nlezianya mma njikwa usoro na ọtụtụ iri afọ nke ọgaranya ahụmahụ. Enge Biotech ebupụla ihe karịrị 100 iche iche nke ngwaahịa na usoro nke formulations karịa mba 30, isi ahịa bụ Asia, North America, South America, Africa na Russia. Anyị enwetawo ezigbo nkwupụta n'ihi ngwaahịa dị mma na ọrụ dị mma.
Mingkọ ugbo bụ ihe kachasị njọ na ụwa
Uru anyị na ebumnuche anyị bụ ime ka ndụ ndị na-emepụta na ndị na-eri ihe, mejuputa ọganihu maka ndị na-abịa, Enge Mission bụ iji mepụta arụmọrụ dị elu, ọgwụ pesticides dị ala na nke dị ala, Chebe ahụike ihe ọkụkụ na ahụike ọha na eze, na-eto ọnụ ya na ndi ahia gburugburu uwa.